Entertainment Archives - News20 Media
Jan52022 by N20No Comments
कोभिड संक्रमणपछि २८ दिनसम्म अचेत बनेकी नर्सलाई अन्ततः यौ न व द्र्धक भि एग्राले बचायो
कोभिड संक्रमणपछि २८ दिनसम्म अचेत बनेकी नर्सलाई अन्ततः यौ न व द्र्धक भि एग्राले बचायो काठमाडौ । सुन्दा अनौठो लाग्छ । तर यो घटनाले सबैलाई सोभ्न बाध्य बनाएको छ । बेलायतमा कोभिड–१९ को संक्रमणपछि मृत्युको मुखमा पुगेकी एक नर्सले पुनर्जीवन पाउनुको कारण खुल्दा अहिले सबै चकित बनेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि २८ दिनसम्म अचेत अवस्था (कोमा) मा पुगेकी बेलायतकी ३७ वर्षीया नर्स मोनिका अलमेइडा अहिले खतरामुक्त बनेकी छिन् । उनले अहिलेले पुनर्जीवन पाएको अस्पताल स्रोतको दावी छ । सबै उपाय असफल भएपछि सहकर्मी डाक्टरले भि एग्रा दिएर उपचार गरेपछि आफ्नो जीवन बँचेको मोनिकाले द सन पत्रिकालाई बताएपछि अहिले उनी चर्चामा छिन् । ‘मेरो होस खुलेपछि कन्सल्टेन्टसँग हल्का मजाक भएको थियो किनभने उहाँलाई मैले चिनेकी थिएँ’, मोनिकाले भनिन्, ‘उहाँले भि एग्रालाई औषधिको रुपमा प्रयोग गरेको बताएपछि म हाँसे र म...
Jan42022 by N20No Comments
प्रेमीले नै आफ्नी प्रेमिका लाई येस्तो फोटो पठाएर ७० लाख मागेपछि….
प्रेमीले नै आफ्नी प्रेमिका लाई येस्तो फोटो पठाएर ७० लाख मागेपछि…. २३ वर्षीया कविता (नाम परिर्वतन) भर्खर सिभिल इन्जिनियरिङको पढाइ सकेर अटोमोबाइल्स कम्पनीमा काम गर्दै आएकी थिइन् । काठमाडौंको सम्पन्न परिवारमा जन्मे/हुर्केकी उनको जागिर र मासिक कमाइ आकर्षक नै थियो । आफ्नो खुट्टामा उभिएकाले बाहिर हिँड्न परिवारबाट उनलाई खासै बन्देज थिएन । त्यसबीचमा एक युवकसँग उनको अफेयर चल्यो । उनीहरू बिदाको समयमा घुम्न जान्थे । प्रेमीले पनि उपत्यकाको एक नाम चलेको गाडी शोरूममा काम गर्दै आएका थिए ।आर्थिक अवस्था भने युवकको अलि कमजोर थियो ।कविताले प्रेमीलाई बेलाबेलामा आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आएकी थिइन् ।टेलिग्राममा उनीहरूबीच दैनिक भिडियो कल हुन्थ्यो ।उनीहरूबीच निजी कुरा पनि शेयररिङ हुने गर्थ्यो । गहिरो प्रेममा रहेकाले उनले प्रेमीलाई कहिल्यै अविश्वास गरिनन् ।तर, एक दिन इमेलमा आएको फोटोले उनको होश उड्यो । इमेलमा ...
Oct282021 by N20No Comments
हेरेपछी सबैको आँसु झार्ने दर्दनाक गित? गणेश र बर्षाको श्वरमा ‘महलमा बस्ने मायालु’ (भिडियो सहित….)
काठमाडौं, ११ कार्तिक। मानव जिवन र गितसंगीत एक रथका दुई पाटो जस्तै हुन ।गितसंगीत बिनाको मानव जीवन हुदैन अनि मानव बिना सङ्गितको अस्थित्व रहदैन । तर सबै गितसङ्गित ले सबैको मन छुन सकेको हुदैन । सबैको मन छुन्छ त केवल केही गितहरुले, हो त्यस्तै पछिल्लो समय लोक दोहोरी गित सबै दर्शक स्रोताको नजरमा लोकप्रिय भन्दै गएका छन् । श्रजक तथा गायक गणेश अधिकारी र गाईका बर्षा लम्सालले भर्खरै बजारमा ल्याएको 'महलमा बस्ने मायालु' ले पनि यतिबेला सर्वत्र चर्चा बटुल्ने देखिएको छ । उत्कृष्ट गीत सिर्जना मार्फत दर्शक स्रोताको मन जित्न सफल लोकप्रिय सर्जक तथा कुशल गायक अधिकारी र कर्णपृय स्वरकी धनी गायिका लम्सालले आवाज दिएको नयाँ गीत महलमा बस्ने मायालु भर्खर मात्र सार्वजनिक भएको छ । गितमा उत्कृष्ट शब्द, लय तथा गाएक गायिकाको अतिनै उत्कृष्ट श्वरका कारण पनि गित छिटै करोड क्लबमा प्रवेश गर्ने अनुमान रहेको श्रजकको अनुम...
बिगतको सम्झना , पहिले नेपालमा यसै गरी धूमधामका साथ विवाह भोज हुने गर्दथ्यो ।
आज भन्दा पचास साठी वर्ष पहिले नेपालमा यसै गरी धूमधामका साथ विवाह भोज हुने गर्दथ्यो ,अब ती विवाह भोजका फोटोहरु देख्न पनि दुर्लभ भयो । पानीको मात्रा अथवा झोल मात्र धेरै भएको दाल, रस मात्र भएको मानिसको संख्या अनुसार नुन र पानी थप्ने गरेर तयार पारिएको खसीको मासुको परिकार,चार टुक्रा चोक्टा पनि भागमा पर्दथ्यो, तेर्सो धोती फेरेर शुद्ध भएर वलीया ब्राम्हण हरूले तयार पारी खुवाउने चलन,सालको टपरीमा भात , दाल,तरकारी ,अचार सवै राखिदिने,रस प्राय सवै चुहिएर सकिने त्यसैले छिट्टै मुछ्नु पर्ने, त्यतिबेला प्लास्टिकका थालको सट्टामा सालको टपरी धेरै राम्रो थियो वातावरण पनि राम्रो थियो मान्छे खुशी पनि थिए अहिलेको भन्दा , शहरको देखासेखीले पुलाउ,प्लेट चम्चाको ब्यबद्था भएको छ तर पहिला बारीको पाटामा बसेर टपरीमा खएको आनन्द अहिले हुदैन । अचकाल त मानीस हरू पैसाको धाक देखाउछन पुरानो चलनत गरनै छोडे बचत पैस...
कात्तिक १ गते सोमवारको राशिफल हेर्नुहोस् ,
मेषः आफन्त तथा साथी भाईसँग राय नमिल्दा दैनिक कामहरु प्रभावित हुन सक्छन् । राजनीति तथा समाजसेवामा समय खर्चिनेहरुले काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । निर्णय गर्न नसक्दा हातमा आईसहेको काम अरुले नै फुत्काउनेछन् । घरजग्गा तथा सवारी साधनको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला विवाद तथा किचलो हुनसक्छ । तरपनि अध्ययन तथा खोजीमुलक क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । शेयर बजार तथा व्यापारमा गरेका लगानी फस्टाएर जानेछ । वृषः न्यालयसँग सम्वन्धीत कामहरु थाँती राख्नुहोला । खेलकुद तथा पराक्रमी क्रिर्याकलापमा भाग लिने अवसर आएपनि भनेजस्तो नतिजा निकाल्न मुस्किल पर्नेछ । बन्धुबान्धब हरुसँग मनमुटाव सिर्जना हुनेछ भने सैद्धान्तिक राय बाजिनेछ । समय मध्ययम रहेकोले चोटपटक लाग्ने तथा स्वास्थ्यमा समस्या देखापर्नेछ । पढ्ने लेख्ने काममा मन नजानाले अरुभन्दा पछी परिनछ । मिथुनः वन्द व्यापारमा लगानी गरी आर्थिक क्षेत्र बलियो बनाउन सकिनेछ । पहिले ...
माधव नेपालको एस पार्टी धेरै दिन नटिक्ने संकेत : एमालेमा खुसीयाली !
काठमाडौं – एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जनविरोधी काम गर्न थालेको भन्दैं ठूलै नेताले विद्रोह गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विभाजनपछि नेता नेपालले नेता कार्यकर्ताको भावनाविपरित काम गरेको भन्दैं ती नेताले विद्रोह गरेको बताएका हुन् । एमाले फुटाएका माधवकुमार नेपाललाई नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टी खोलेको केही दिनमै धक्का लागेको छ । पार्टी विभाजनपछि एस पार्टी सोलुखुम्बुका नेता बनेका तेन्जी शेर्पाले अध्यक्ष माधव नेपालको पार्टीमा विद्रोह गर्दै नेकपा एमालेमै फर्किएका छन् । एस निकटको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियूको केन्द्रीय कमिटी सचिवालय सदस्य समेत रहेका शेर्पा र जिल्ला कमिटी सदस्य सोना शेर्पा एमालेमै फर्किएका छन् । विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय र प्रभावशाली मानिएका शेर्पा विभाजनबाट बृहत् कम्युनिष्ट एकताको राष्ट्रिय आवश्यकता पूर्ति नहुने भन्दै एमालेमै...
काठमाडौं उपत्यकामा बढ्यो चहलपहल !
३१ असोज, काठमाडौं । दशैंको विदा सकिएसँगै विभिन्न जिल्लाहरुमा चहलपहल बढेको छ । बन्द भएका सरकारी कार्यालयहरु पनि आजबाट खुलेका छन् । दशैं मनाउन गाउँघर गएकाहरु काठमाडौं उपत्यका भित्रिने क्रम जारी छ । काठमाडौंका कलंकी, बल्खु, कोटेश्वर, बालाजु लगायतका नाकाहरुमा दशै मनाएर राजधानी फर्कनेहरुको भिड बढेको देखिन्छ । मानिसहरूको भिडभाडले काठमाडौं पुरानै लयमा फर्किन थालेको आभास मिल्छ । काठमाडौं उपत्यकामा आइतबारबाटै चहलपहल बढेको देखिएको थियो । सडकहरुमा गाडीको संख्या पनि बाक्लिंदै गएको थियो । सवारी साधनको चहलपहल बढे पनि सडकमा जाम हुने गरी चाप भने अझै नभइसकेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपि आज टीकाको तेस्रो दिन पनि मान्यजन तथा आफन्तबाट टीका थाप्ने र आशिर्वाद लिने क्रम चलिरहेको छ । टीकाको दिन आफन्त तथा मान्यजनबाट टीका लगाउन नभ्याएकाहरुले कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म टीका थाप्ने प्रचलन छ ।...
प्रदीपको ‘दिपेन्द्र सरकार’ किन थन्कियो ?
घोषणा भएर पनि निर्माण हुन नसकेका नेपाली फिल्मको घोषणा सभा भने अधिकांश पाँच तारे होटलमा भएका छन् । यस्तै, एक फिल्म हो ‘दीपेन्द्र सरकार’ । युवा स्टार प्रदीप खड्कालाई लिड रोलमा अनुवन्धित गर्दै निर्माता सन्तोष सेनले काठमाडौंको पाँच तारे होटल याक एण्ड यतिमा फिल्मको घोषणा गरे । यो फिल्मको निर्माण घोषणा सन्तोष निर्मित तथा प्रदीप अभिनीत फिल्म ‘प्रेमगीत २’ रिलिज छेको अर्थात्, वर्ष २०७४ जेष्ठ दोस्रो सातामा गरिएको थियो । कतिले यसलाई ‘प्रेमगीत २’ को चर्चामा कमी आउन नदिन गरिएको प्रपोकाण्ड पनि भने । तर, निर्माता सेनले फिल्म ‘दीपेन्द्र सरकार’ बनाएरै छाड्ने दाबी गरेका थिए । पूर्व सैनिक रथी विवेक कुमार शाहद्वारा लिखित दरबारसँग सम्बन्धित पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ माथि आशुसेन फिल्मसले यो फिल्म निर्माण गर्न लागेको हो । राजा दीपेन्द्र विरविक्रम शाह र उनकी प्रेमिका भनिएकी देवयानी राणाको प्रेमकथा...
Oct112021 by N20No Comments
बिहान उठ्नासाथ तपाइले यी १० चीज देख्नु भयो भने मालामाल हुनुहुनेछ,पुरा पढेर सेयर गर्नुहोस
यी १० चीज हामिले बिहान उठ्नासाथ देख्यौ भने भाग्य खुल्छ, जान्नुहोस् साथै सेयर पनि गरौ,व्यक्तिको पैसासंग जोडिएको इच्छा कहिले पुरा होला, महालक्ष्मीको कृपा कहिले मिल्छ, यो जान्नको लागि ज्योतिषमा केही संकेत बताइएको छ। मान्यता छ कि जब यी संकेत मिल्छन् तब सम्झनुपर्ने छ कि व्यक्तिलाई लक्ष्मीको कृपा मिल्ने छ र पैसाको समस्या टाढा हुनेछ।व्यक्तिको पैसासंग जोडिएको इच्छा कहिले पुरा होला, महालक्ष्मीको कृपा कहिले मिल्छ, यो जान्नको लागि ज्योतिषमा केही संकेत बताइएको छ। मान्यता छ कि जब यी संकेत मिल्छन् तब सम्झनुपर्ने छ कि व्यक्तिलाई लक्ष्मीको कृपा मिल्ने छ र पैसाको समस्या टाढा हुनेछ।यदि कसैलाइ बिहान–बिहानै उखु देखाइ पर्छ भने निकट भविष्यमा धन सम्बन्धी कार्यमा सफलता मिल्नेछ।यदि घरबाट बाहिर निस्कनासाथ गाई देखा पर्छ भने यो शुभ संकेत हो। गाई यदि सेतो रंगको भए झनै शुभ हुनेछ। नरिवल, शंख, मयुर, हास, फूल आदी...